‘अस्पताल भित्र ‘रेड-एल्लो-ग्रीन जोन’ बनाउनुपर्छ’ – Health Post Nepal
‘अस्पताल भित्र ‘रेड-एल्लो-ग्रीन जोन’ बनाउनुपर्छ’
२०७७ असार १३ गते ६:०८
गत सोमबार वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत चार जना स्वाथ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखियो। अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएका विरामीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पताल नै सिल गरी त्यहाँ कार्यरत ४२ स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो।
बिहीबार जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत चारजना स्वास्थ्यकर्मीमा समेत कोरोना पुष्टि भएको छ। प्रतिष्ठानमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पुष्टि भएसँगै अस्पतालको आकस्मिक कक्षवाहेक अन्य सेवा बन्द छन्।
पहिले भारतबाट कर्णाली प्रवेश गरेका नागरिकबाट कोरोनाको जोखिम रहे पनि अहिले संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिसकेको छ। योसँगै कर्णालीका स्वास्थ्यकर्मी संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्।
कोरोनाविरुद्व कर्णालीको पूर्वतयारी सुस्त भएका कारण कोरोना संक्रमणबाट स्वाथ्यकर्मी बढि जोखिममा रहेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत चिकित्सक नवराज केसी बताउँछन्। ‘कोरोना संक्रमणको अवस्था नभएको समयमा कर्णालीमा प्रयाप्त तयारी पुगेको थिएन। स्वास्थ्यकर्मी यस विषयमा अन्यौलमै थिए। उनीहरूलाई कोरोना संक्रमण रोकथामका लाागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा तालिम तथा अधिक जानकारी अभाव थियो।’
हरेक प्रकारका सरुवा रोगमा स्वास्थ्यकर्मी बढि जोखिममा हुन्छन्। किनकी उनहरूले सिमित स्रोतसाधनको प्रयोगले संक्रमणसँग लड्नुपर्ने हुन्छ।
स्वास्थ्यकर्मीमा जोखिम न्युनिकरण गर्न सके कोरोना संक्रमण रोकथामका क्रियाकलाप प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने डा. केसीले बताए। ‘कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि स्वास्थ्यकर्मीका लागि सामग्रीको अभाव हुन्छ। पिपिईलगायतका सामग्री अझै पनि अभाव छन्। अस्पतालले स्वास्थ्यकर्मीलाई धेरै मात्राका पिपिईलगायतका सामाग्री दिन सकिरहेका छैनन्,’ उनले भने।
अस्पतालमा कोरोना संक्रमण न्युनिकरणका लागी क्षेत्रगत रुपमा विभाजन गरिनुपर्ने डा. केसीको सुझाव छ। उनले भने, ‘अस्पतालहरूमा रेड जोन, एल्लो र ग्रीन जोनका रुपमा क्षेत्रगत विभाजन गरेर स्वास्थ्य सेवा दिइनुपर्छ। यसले कोरोना संक्रमणलाई केहि हदसम्म रोकथाम गर्न सकिन्छ।’